Hlola iChicago, Usa - World Tourism Portal
Hlola iChicago, Usa
Yini ukubona. Izindawo ezihamba phambili eziphezulu eChicago
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeChicago
Bukela ividiyo ekhuluma ngeChicago
Hlola iChicago, aI-lso yabiza idolobha elinomoya eliseMidwest eduze nolwandle iGreat Lakes. Yidolobha lesithathu ngobukhulu nelidolobha elikhulu e-United States elinabantu abasedolobheni abasondela kwizigidi ze-3 nesibalo samadolobha asondela kwizigidi ze-10. Waziwa kakhulu ngomculo wasendlini nomculo wokudansa we-elekthronikhi, ama-blues, i-jazz, amahlaya, ukuyothenga, ukudla, ezemidlalo, ukwakhiwa kwezakhiwo, amakolishi abhekwe kakhulu namayunivesithi, kanye nokuheha amasiko kaNdunankulu.
Njengomgubho weMidwest, iChicago kulula ukuyithola ngesibhakabhaka sayo esihle ebuka amanzi echibi elikhulu iLake Michigan, umbono omangazayo owembula ngokushesha iminyuziyamu esezingeni lomhlaba, amamayela wamabhishi anesihlabathi, amapaki amakhulu, ubuciko bomphakathi, kanye mhlawumbe yedolobha elibukeka kahle kunawo wonke emhlabeni.
Ngomcebo wokubonakalayo okubonakalayo nezindawo ezingomakhelwane ongazihlola, kunele ukugcwalisa ukuvakasha kwezinyanga zingakaze zibonwe ukuphela. Lungiselela ukumboza inhlabathi eningi; Izincazelo zeChicago zitholakala kuphela lapho zihamba, ngemigwaqo engaphansi kwaso nojantshi ophakeme ngokomlando, nangamehlo aphakanyiselwe esibhakabhakeni.
Ingxenye evakasheleke kakhulu eChicago indawo yayo enkulu emaphakathi, equkethe izindawo ezinjenge Downtown, River North, Streeterville, Old Town, Gold Coast, Central Station, South Loop, Printer's Row, Greek Town, kanye ne-West West Side phakathi abanye. Bebonke, le mizi iqukethe ama-skyscrapers amaningi, ukuheha, kanye nezikhungo ezikleliswe kakhulu. Kepha futhi kunezinto eziningi ezikhangayo ezitholakala kwezinye izifunda zedolobha. IChicago liqukethe iDowntown, iNorth Side, iSouth Side, kanye neWest Side - iSide ngasinye sinegama ngokulandela indlela esivela eDowntown. ILoop yindawo yezimali, yamasiko, yezokuthengisa, kanye neyokuhamba etholakala eDowntown. Esinye isifunda esiku-Central Area yiNorth Michigan Avenue. Le ngxenye yeMike Avenue Avenue, kanye nemigwaqo esondelene nayo, ibizwa nge- Magnificent Mile futhi iqukethe izitolo ezisezingeni eliphezulu, izitolo zokudlela kanye nezindawo zokudlela.
INyakatho, iNingizimu, kanye neNtshonalanga Side yaseChicago akuzona izindawo ezingomakhelwane ngokwazo, zingamakhamu amakhulu amakhulu edolobha lelo ngalinye liqukethe izindawo eziningi ezahlukahlukene. Izakhamizi zivame ukukhomba ngokuqinile nomakhelwane bazo, zibonisa indawo yangempela yasekhaya namasiko. Ngezansi kwezifunda ezahlukahlukene zeChicago kanye nezinye izindawo ezingomakhelwane eziqukethe:
IDowntown (ILoop, Eduze Kwenyakatho, Eduze Ningizimu, Eduze Ntshonalanga)
Isikhungo sayo yonke iMidwest yomsebenzi nomsebenzi wokudlala, nokubaluleka komhlaba wonke ngezinhloko ezinkulu zenkampani, ama-skyscrapers, ukuyothenga, ukuhamba kwemifula, izinkundla ezinkulu, amapaki, amabhishi, iminyuziyamu, ipiyano, inkundla yezemidlalo; indawo iqukethe ezinye zezinto ezaziwa kakhulu ezweni
INorth Side (iLakeview, iBoystown, iLincoln Park, Idolobha Elidala)
Izindawo ezingomakhelwane ezinokuzijabulisa okugcwele ezindaweni zemidlalo yaseshashalazini nase-Friendly Confines of Wrigley Field, kanye nethoni lemigoqo kanye namakilabhu.
I-South Side (iHyde Park, iBronzeville, iBridgeport-Chinatown, iChatham-South Shore)
Isikhungo Somlando Esimnyama, iHyde Park kanye neNyuvesi yaseChicago, Chinatown, iWhite Sox, ukudla okumnandi komnyuziyamu, iMnyuziyamu omuhle kakhulu weSayensi Nezimboni, kanye neSikhungo SikaMongameli saseBarack Obama.
I-West Side (iWicker Park, iLogan Square, Eduze Ntshonalanga Side, Pilsen)
Isigcawu sobuhlanga, imigoqo ye-dive, indawo yokubeka umxhwele kakhulu, futhi ama-hipsters atheleka ngasohlangothini oluxakekile lomuzi
IFar North Side (Uptown, iLincoln Square, Rogers Park)
I-Ultra-hip futhi ilele emuva, enamamayela wamabhishi neminye yemiphakathi ethutheleka kakhulu ezweni
IFar West Side (IDolobhana Elincane, iGarfield Park, iHumboldt Park, e-Austin)
Ukude kakhulu nethrekhi yabavakashi ongashayi kuyo kungenzeka ungayitholi indlela yakho ebuyela emuva, kodwa lokho kunikezwe konke ukudla okuhle, umbhangqwana wamaqembu amakhulu we-blues namapaki amakhulu
I-Southwest Side (Emuva Kwama-Yards, Marquette Park, Midway)
Owawuyikhaya esifundeni esikhulu sokupakelwa inyama i-Union Stockyards, izindawo ezinkulu zasePoland nezaseMexico, kanye ne-Midway Airport
IPoland Village, amakhaya aqophe umlando nezinkundla zemidlalo yaseshashalazini, kanye namagugu angatholakali ezindaweni ezingomakhelwane esiteshini sezindiza i-O'Hare International Airport
Southeast Side (Umlando Pullman, East Side, South Chicago, Hegewisch)
Umdondoshiya, oyimboni ongaphansi kweChicago, ekhaya udonsela endaweni eyodwa enkulu yabavakashi: Umlando wasePullman District
ISouth South West-Side (Beverly, Mount Greenwood), akuvamile ukuthi umakhelwane abe nobuhle obunjengalolu endaweni yedolobha
Ngokuya lapho isimo sezulu saseChicago siya khona, ake sithi iChicago yidolobha elikhulu ngakho-ke izinto zivame ukushaywa ngokulingana ukwedlula indlela ebebengenza ngayo kwamanye amadolobha afaka isimo sezulu esifanayo. Ubusika eChicago buyabanda impela futhi ihlobo alishisi impela kepha banikela ngemikhakha, imikhosi nemicimbi.
Ukubhema kwenqatshelwe ngumthetho wombuso kuzo zonke izindawo zokudlela, imigoqo, amakilabhu asebusuku, izindawo zokusebenza, kanye nezakhiwo zomphakathi. Kuvinjelwe futhi kungamamitha ayishumi nanhlanu kunoma yikuphi ukungena, iwindi, noma ukuphuma endaweni yomphakathi, naseziteshini zezitimela ze-CTA.
IChicago ihanjiswa yizikhumulo zezindiza ezimbili ezinkulu: i-O'Hare International Airport kanye ne-Midway Airport. Kukhona amatekisi amaningi ukuya nokubuya enkabeni yedolobha, kepha angabiza, ikakhulukazi ngesikhathi sehora ngenxa yethrafikhi.
IChicago ihluke ngokuphelele ngoba isungule insiza yesitimela engaphansi / iphakamise inkonzo yesitimela esisheshayo esiteshini sezindiza sayo; okuthile amadolobha amaningi angazange akwenze nhlobo, noma mhlawumbe aqede ukuya esikhumulweni sezindiza esisodwa esifundeni sawo. Izitimela ze-CTA zinikezela ngemisebenzi eqondile kuzo zombili izikhungo zezindiza zakwa-O'Hare nase Midway.
Ngenkathi leli dolobha linokuheha okuningi okuhle enkabeni / enkabeni yedolobha elikhulu, abantu baseChicago abaningi bahlala futhi bayadlala ngaphandle kwesifunda esimaphakathi. Abahambi futhi baya ezindaweni eziseduze zedolobha ukuze bangenise impilo yasendaweni yendawo, basebenzise izinhlobo eziningi zokudlela okumnandi, futhi babone namanye amasayithi ayingxenye yeChicago. Ngenxa yesistimu enkulu yokuhamba komphakathi yedolobha, okubandakanya iziteshi zomgwaqo ezingaphansi kuka-140 Chicago Transit Authority / iziteshi zezitimela eziphakeme, inethiwekhi yedolobha lesitimela / yedolobha elisemgwaqweni onguthelawayeka, nemizila yamabhasi edlula lapho idlula ngakwamanye amadolobha ambalwa ahlukene, zonke izingxenye zeChicago empeleni kufinyeleleke.
I-Downtown Chicago ihamba ngezinyawo kakhulu, inemigwaqo ebanzi, ukwakhiwa okuhle, nobuningi bamahhotela, ukuyothenga, izindawo zokudlela kanye nezindawo eziheha amasiko. Uhlelo lweChicago Pedway System luwusizo kubahambi abafuna ukugwema ukubanda noma iqhwa. Kuyisistimu yezindawo ezingaphansi komhlaba, ezisezingeni eliphansi, nangaphezulu ezixhumanisa izakhiwo zamadolobha.
IChicago inohlelo olukhulu futhi oluphelele lwamabhasi, futhi amabhasi ngokuvamile asebenza njalo. Lokhu kuvumela abaseChicago ukuthi baye ezitobhini zebhasi balinde ibhasi ngaphandle kokubheka amashejuli ebhasi, njengoba amabhasi ejwayele ukugijima njalo ngemuva kwemizuzu embalwa.
Izimoto eziqashisayo ziyatholakala kuzo zombili izikhumulo zezindiza (i-O'Hare neMidway) kanye nasemahhovisi amaningi okuqasha eLoop nakwezinye izindawo ezisakazeke ezindaweni ezahlukahlukene ezisedolobheni. I-O'Hare inamahhovisi ezimoto amakhulu kakhulu futhi aqasha kakhulu, enezinhlangano eziningi ezisebenza amahora we-24.
Ukuhamba ngebhayisikile eChicago kungaphephile futhi kunikeze umvuzo uma kwenziwa ngokucophelela. Imigwaqo emisha ehlukaniswe ngebhayisekili endaweni yaseLoop ibukeka kakhulu lapho ezinye izindlela zokuhamba zisezingeni eligcwele.
I-Itineraries - iminyuziyamu-Izakhiwo Zamabhishi - Amabhishi-Amapaki-Izindawo ze-Ethth eChicago
Uma uzimisele ngokuphelele futhi uhlela ngokucophelela, ungavakashela eChicago ngesikhathi somkhosi-ngesonto elingaphansi. Kuyinselele nokho. Iningi lomakhelwane, izifunda, kanye namaqembu enkonzo aphatha eyabo imikhosi yaminyaka yonke entwasahlobo, ehlobo, nasekuweni. Futhi idolobha linabaningi ebusika. Kunemicimbi embalwa yedolobha engeke yaphuthelwa. Ku-Loop, iGrant Park ibamba iTaste of Chicago ngoJulayi, umkhosi omkhulu wokudla ongaphandle emhlabeni; futhi kunemikhosi emine yomculo emikhulu: iBlues Fest neVangeli Fest ngoJuni, iLollapalooza ngo-Agasti, neJazz Fest ngoSepthemba. Konke kodwa iLollapalooza kumahhala. Iwebhusayithi yomculo eseChicago esekwe eChicago nayo isingatha umcimbi wabo waminyaka emithathu we-rock, rap, nokuningi ehlobo e-Union Park e-West West Side.
Ngokungenela kuyo yonke inkundla yezemidlalo ephakeme futhi amanyuvesi ambalwa endaweni, abalandeli bezemidlalo eChicago banokuningi okubenza bahlale bematasa. AmaChicago Bears adlala ibhola e-Soldier Field e-Near South kusuka ngoSepthemba ofudumele kuya kumakhaza ngoJanuwari. Njengoba amaqembu e-baseball ehlukanise idolobha ngesigamu, akukho lutho olubamba ukuqaphela kwemidlalo yaseChicago njenge-playoff run from the Bears. Abalandeli abasabelayo kulindeleke ukuthi bakwazi ukucaphuna okungenani amavesi amabili weSuper Bowl Shuffle ememori, bavele lapho kubalwa uWalter Payton.
AmaChicago Bulls adlala i-basketball e-United Center e-West West Side. Bayiqembu elithokozisayo okufanele silibuke. AmaChic Blackhawks abelana ngezindawo namaBulls. Njengelinye lamaqembu "Wangempela Ayisithupha" ku-hockey eqeqeshiwe, amaBlackhawks anomlando omude kwezemidlalo yawo, futhi iqembu libhekana nokuvuselelwa ngemuva kokuthumba indebe yeStanley e2010 okokuqala eminyakeni engu-49 nokuwina amanye ama-Championship amabili I-2013 ne-2015. Imidlalo yasekhaya yamaqembu womabili ivame ukuthengisa, kepha amathikithi ngokuvamile angatholakala uma uhlola nxazonke. Womabili amaBulls namaBlackhawks adlala kusukela ngasekupheleni kuka-Okthoba kuya ekuqaleni kuka-Ephreli.
Kuyinto baseball, nokho, lapho ukufutheka kwesizwe kwemidlalo yaseChicago kubonakaliswa kangcono. AmaChicago Chub adlala eWarrigley Field (ibhola elidala kakhulu leNational League ballpark kanye nebhola lezinyawo elidala lesibili elidala) eNorth Side, eLakeview, naseChicago White Sox adlala e-US Cellular Field (Comiskey Park, ngaphansi kwamalungelo wokuqamba igama) ohlangothini lwaseNingizimu, eBridgeport. Womabili la mazwe anomlando ongaphezulu kwekhulu leminyaka, futhi womabili amaqembu adlala imidlalo yasekhaya ye-81 kusuka ngo-Ephreli kuya ekuqaleni kuka-Okthoba. Konke okunye kuyindaba yombono ophethwe ngolaka. Uchungechunge lwemidlalo emithathu lapho amaqembu edlala omunye nomunye amathikithi ezemidlalo ashisa kakhulu eChicago nganoma yimuphi unyaka owanikwa. Uma othile ekupha amathikithi kumdlalo, hlanganisa.
Kunenqwaba yamaligi amancane edolobheni futhi, yize amanye edlala imidlalo yawo ezindaweni ezingaphansi. IChicago Fire (iMajor League Soccer) neChicago Red Stars (National Women Soccer League) idlala ibhola endaweni eseBridgeview, iChicago Sky idlala ibhasikidi labesifazane eUIC Pavilion e-West West Side, kanye neWindy City Rollers skate flat -track roller derby eCicero yangumakhelwane. Amaqembu amancane e-baseball yeligi nawo athola izindawo ezingaphansi kwedolobha.
Ngenkathi abadlali bemidlalo yasekolishi bengeyona eye yamaphuzu amakhulu eChicago, ibhola laseNyakatho Ntshonalanga (e-Evanston) kanye neDePaul basketball (off-campus in Rosemont) bakhombisa izimpawu zokuphila ngezikhathi ezithile. Uma uzithola useHyde Park, buza othile ukuthi iqembu lebhola lebhola laseNyuvesi yaseChicago lenza kanjani - umqalisi wengxoxo yomlilo oqinisekile.
Noma yini oyidingayo, ungayithenga eChicago, kwisabelomali noma ngokunethezeka. Umgwaqo odume kakhulu wokuthenga eChicago uyinqaba yeMike Avenue eyaziwa ngokuthi yiMagnificent Mile, endaweni eseduze kwaseNyakatho. Ifaka ama-boutiques amaningi okuqamba, nezindawo eziningi ezakhiwe ngezitebhisi ezigxiliwe ezitolo ezinkulu zomnyango njenge-900 N Michigan kanye ne-Water Tower Place. Imikhiqizo eyengeziwe iyatholakala ezitolo ezingekho emapheshana eningizimu nasentshonalanga yeMichigan.
IStreet Street beyiyindlela enhle yezitolo zomnyango eLoop, kepha manje isiyisithunzi sendawo yayo yangaphambili, ngesakhiwo esakhiwe ngoCarson Pirie Scott uLouis Sullivan esakhiwe manje isitolo seTarget, nemikhosi ehlaselayo evela I-New York ephethe isithunzi sokwakhiwa kweMarshall Field ngaphansi kwegama elithi Macy's (Iningi lezindawo lisakugcizelela ukuthi "iMarshall Field's"). Ngisho neFayilene Basement, indawo edumile yesaphulelo, manje sekuvaliwe, yize ezinye izitolo ezimbalwa zesaphulelo ziphikelela.
Ukuze uthole isikhumbuzo esikhulukazi saseChicago, khetha ibhokisi likaFrango Mints, ushokoledi abathandwa kakhulu abake banikezwa ngabakwaMarshall Field's futhi abasatholakala ezitolo zakwaMacy. Yize ingasenziwa ekhishini lesitezi nantathu lesitolo Street State, iresiphi yasekuqaleni ibukeka isasebenza, ejabulisa izixuku ezithembekile ziyayithanda le ukunambitheka - futhi kubi kakhulu kunoma ngubani ofuna ukugwema amafutha.
Kodwa-ke, ukuthola okuhlangenwe nakho okuyingqayizivele kokuthenga, hlola izitolo ezimnandi, ezi-eclectic eLincoln Square, noma ezitolo eziseceleni eBucktown naseWicker Park, okuyindawo futhi yokuthola umculo we-fiends - yize kukhona amaconsi abalulekile e-vinyl nakwezinye izingxenye zedolobha. ISouthport eLakeview naseArmitage eLincoln Park nayo inezindawo zokudlela ezifashisayo ezinesiphequluli.
Okwezobuciko noma zokuqamba izimpahla zasekhaya, i-River North indawo okufanele uhambe kuyo. Ibekwe phakathi kweMerchandise Mart neChicago Avenue Brown Line “L” esitobhini esiseduzane neNorth North, isigodi segalari yoMfula North siba nesifunda esikhulu kunazo zonke sezobuciko nokuklama eNyakatho Melika ngaphandle kweManhattan. Yonke le ndawo iyakwazi ukuhamba futhi iyenzela ukuthengela amafasitela kumnandi.
Izimpahla ezivela emhlabeni wonke ziyatholakala ezitolo ezingenisa ezindaweni eziningi zaseChicago ukuze uma uhlola iChicago uqinisekise ukudlula lapho.
Uma uluhlobo oluthandayo ukubhekabheka ezitolo zezincwadi ezizimele, iHyde Park ine-assortment emangalisa yezitolo ezinothuli ezisetshenziselwa ukuthengiswa okusetshenziselwa ukuthengisa izincwadi ezenzelwa ezinkulungwaneni zasendulo ze-17th, nesitolo sezincwadi esikhulu kunazo zonke emhlabeni. I-Printer's Row in the South South nayo iyindawo enhle yokumisa abathandi bencwadi.
Okufanele ukudliwe - isiphuzo - umculo eChicago
Hlola izindawo eziseduze naseChicago